Alina dimy ao amin'ny Freddy's mitohy ao amin'ny Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Alina dimy ao amin'ny Freddy's Mitohy ao amin'ny Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator
Alina dimy ao amin'ny Freddy's Mitohy ao amin'ny Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator
by Shaun Horton Desambra 7, 2017
nosoratan'i Shaun Horton Desambra 7, 2017
Scott Cawthon dia bandy tsy mitoko. Ny dimy alina nataony tamin'ny andiany Freddy dia misy atody Paska ary misy fambara maloto miraikitra lalina ao anatin'ny kaody lalao ka mila manontany tena ianao indraindray hoe ahoana no hahitan'ny olona azy ireo. Ka tsy tokony hahagaga raha nahita fa namoaka ilay Five Night efa nandrasana fatratra tao amin'ny Freddy's 6 nafenina tao anaty lalao hafa izy. Taorian'ny fanambarana fa nofoanana ny FNAF 6 tamin'ny faran'ny volana Jona, Ny Pizzeria Simulator an'i Freddy Fazbear dia nibolisatra tamintsika tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity, ary miaraka amin'izany, ny fihetsika manaraka ao amin'ny Five Nights at Freddy's Story.
Araka ny tiana holazaina amin'ny lohateny dia toa lalao simulator orinasa ny lalao. Manomboka amin'ny trano fisakafoanana ifotony ianao ary mividy jiro, lovia, lalao ary na dia animatronics aza. Mametraka azy ireo ianao, mitazona azy ireo, mandray sponsorship, manafatra takelaka sy napkin ary manonta afisy. Enjehina mihitsy ianao raha mampiasa fitaovana tsy nety na tsy nitazona azy, ary maratra ny olona.
Amin'ny lamaody tena dimy alina amin'ny lamaody an'i Freddy anefa, raha vantany vao misokatra ny trano fisakafoanana ho an'ny andro ianao dia miverina any amin'ny birao iray, ary ao amin'ny efitrano kely ianao ary tsy maintsy miatrika ireo zavatra manantona anao amin'ny alalàn'ny rivotra rehefa miasa ianao.
Sary natolotry ny youtube.com
Ho an'ireo izay te handavaka ao amin'ny lore, tsy vitan'ny hoe afaka mividy sy mametraka lalao ao amin'ny pizzeria anao ianao, dia afaka milalao azy ireo koa! Rehefa mikapoka azy ireo ianao, na mahatratra dingana lehibe hafa, ny ankamaroan'izy ireo dia manome anao sombin-tantara mifandraika amin'ny franchise. Aza diso, na izany aza, ity lalao ity dia manana sombiny tantaraina holazaina, izay ho hitanao amin'ny alàlan'ny alàlan'ny lalao.
Raha vonona ny hanandrana ny tananao ianao amin'ny lalao farany amin'ny Five Nights at Freddy's misy amin'ny Steam izao, ary ny tsara indrindra, maimaim-poana!
Raha tsy fantatrao ny momba ny tantara hatreto, na mila mpamelombelona amin'ity andiany iray manontolo ity dia azonao atao koa ny manamarina ny fandaharam-potoana feno noforonin'i Ykaonty ouTube Game Theory.
Dimy Nights amin'ny Freddy ny
Staub's Creepy 'vavahadin'ny Devoly' dia nahazo ny datin'ny famoahana ny volana Janoary
Tranofiara feno voalohany ho an'ny 'World Jurassic: Fanjakan'ny fahalavoana'